किन लैजाने बर्दियामा गैँडा ? | चितवन पोष्ट दैनिक
किन लैजाने बर्दियामा गैँडा ?
२०७० पुष १५, सोमबार ०२:५० गते
चितवनबाट लगिएका न गैँडा न बाघ नै जोगाउन सकेको छ बर्दियाले । मुलुकमा सशस्त्र संघर्ष उत्कर्षमा रहेका बेला चितवनबाट बर्दिया पुगेका गैँडा तस्करले स्वाहा बनाए । युद्धकालमा सुरक्षा चुनौती थियो, जोगाउन सकिएन भन्न मिल्छ । तर, मुलुकमा शान्ति कायम भएपछि दुई वर्षअघि यहाँबाट बर्दिया पु¥याइएको दुर्लभ वन्यजन्तु बाघसमेत तस्करहरुबाट बचेन । पटकपटक गरेर चितवनका ८३ गैँडा बर्दिया लगिएको छ । तर, दुई वर्षअघि भएको गणनामा बर्दियामा जम्मा २४ गैँडा फेला परे । चितवनबाट लगिएका भन्दा चौँथाइ गैँडा पनि नरहेको बर्दियामा फेरि यहाँका गैँडा लैजाने तयारी सरकारले सुरू गरेको छ । नजोगिने बर्दियामा दुर्लभ गैँडा किन लैजाने ? सरकारी योजनाप्रति संरक्षणकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मेघबहादुर पाण्डे दुई महिनापछि चितवनबाट गैँडा स्थानान्तरणको काम सुरू हुने बताउँछन् । चितवन निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रबाट सुरूमा १० वटा गैँडा बर्दिया लैजाने योजना रहेको पाण्डेले बताए । निकुञ्ज प्रशासनले स्थानीय सरोकारवालाको राय संकलन सुरू गरेको छ ।
चितवनबाट बर्दिया गैँडा लैजाने तयारीप्रति स्थानीय सरोकारवालाले असन्तोषसमेत प्रकट गर्न थालेका छन् । ‘निकुञ्जले सौराहामा छलफल गराएको थियो । हामीले तुरून्त लैजाने काम ठीक हुँदैन भन्ने राय राखेका छौँ’, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गतको केरूङ्गा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष विजय भुजेलले भने । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमै दुर्लभ मानिएको एकसिंगे गैँडाको मुख्य वासस्थल हो । विश्वमा भारत असम राज्यको काजिरङ्गा नेसनल पार्कमा सबैभन्दा धेरै एकसिंगे गैँडा छन् । त्यसपछि चितवनमै धेरै गैँडा पाइन्छन् । चितवनबाट सन् १९८४ देखि सन् २००० सम्म पटकपटक गरेर ८७ वटा गैँडा स्थानान्तरण गरिएको छ ।
चितवनबाट लगिएका ८७ मध्ये चारवटा गैँडा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष र अन्य बर्दिया निकुञ्जमा छाडिएको थियो । बर्दियामा छाडिएका मध्ये ७२ गैँडा निकुञ्जको बबइ क्षेत्रमा छाडिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको तथ्याङ्क छ । बबइ क्षेत्रमा ५८ सालको संकटकालअघि ८४ वटासम्म गैँडा भेटिएको ठाउँमा ६३ सालमा अनुगमन हुँदा एउटा पनि गैँडा फेला परेको थिएन ।
दुई वर्षअघि भएको गैँडा गणनामा पूरै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जम्मा २४ गैँडा भेटिएका थिए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट ८३ वटा गैँडा स्थानान्तरण गरिएको बर्दियामा जम्मा २४ गैँडा भेटिँदा संरक्षणकर्मीहरु सुरक्षा अवस्था सुदृढ नबनाई फेरि गैँडा लैजाने कुराको विपक्षमा छन् । बर्दियामा चोरीसिकारीले नै गैँडा मारेको देखिएको छ ।
बबइको गुठी भन्ने स्थानमा रहेको एउटा सुरक्षा पोस्ट विसं २०५८ को संकटकालपछि विस्थापित भएको थियो । ‘अहिले बबइ क्षेत्रमा तीन ठाउँमा सुरक्षा पोस्ट राखेका छौँ । निकुञ्जका अन्य क्षेत्रमा पनि पोस्टहरु थपिएका छन् । त्यसैले, अहिले सुरक्षाको समस्या छैन’, निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक पाण्डेले भने । यो पटक पनि गैँडा बबइ क्षेत्रमै लैजान लागिएको हो ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बर्दिया निकुञ्जमा पठाइएका गैँडा मात्रै होइन, बाघजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तु पनि जोगिन सकेको छैन । विसं २०६७ को असोजमा सौराहाको एक होटलमा घाइते बाघ भेटियो । उपचारपछि निको भएको सो बाघ बर्दिया लगियो । दुई वर्षको सो भाले बाघको नमोबुद्ध नाम राखियो । अनि स्याटेलाइट कलर जडान गरेर बर्दियाको जंगल पठाइयो ।
बाघ जंगलमा भए पनि स्याटेलाइट कलरका कारण बर्दिया मात्रै होइन, काठमाडौँको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागमा बसेर बाघको अनुगमन गर्न सम्भव भएको थियो । बाघ हिँडे नहिडेको, खाए नखाएको जस्ता सबै जानकारीहरु स्याटेलाइट कलरका माध्यमबाट कम्प्युटरसम्म आउँथ्यो । कर्मचारीहरु निकुञ्जको कार्यालय र विभागबाटै यी कुराहरु कम्प्युटरमा हेरिरहेका हुन्थे । नमोबुद्धलाई पनि बर्दियाको बबइ उपत्यकामा छाडिएको थियो । उच्च सुरक्षा प्रबन्ध गरेर छाडेको बाघ पनि जोगिएन, सिकारीको हातमा प¥यो । बाघको शरीरमा जडान गरेको स्याटेलाइट कलर जलेको अवस्थामा फेला प¥यो । बाघको आन्द्राभुँडीबाहेक अरु फेला परेन । तस्करहरुले नै बाघ मारेको निकुञ्जका तत्कालीन प्रमुख संरक्षण अधिकृत टीकाराम अधिकारीको भनाइ छ ।
सो घटना संकटकाल हटेर शान्ति स्थापना भएपछिको अवस्थामा भएको थियो । सुरक्षाको अत्याधुनिक प्रबन्ध हुँदाहुँदै पनि बाघ जोगिन सकेन । तसर्थ, बर्दिया निकुञ्जमा तस्करहरुको कुन हदसम्मको दबदबा छ भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । त्यसैले, चितवनका सरोकारवालाहरु तुरून्त गैँडा लैजाने कुरोको विरोधमा रहेको मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भुजेलले बताए ।
चितवन निकुञ्जमा हाल ५०३ गैँडा छन् । बर्दियामा २४ र शुक्लामा सात गरेर नेपालभर गैँडाको संख्या ५३४ छ । कुनै बेला चितवनमा मात्रै ५३४ वटा गैँडा थिए । यो संख्या घटेर ३७२ सम्म भएको थियो । चितवनमा पछिल्लो समय गैँडाको वृद्धिदर राम्रो छ । संख्या थेग्नै नसक्ने गरेर बढेको पनि छैन । त्यसैले, लैजान हतार गर्न नहुने भुजेल बतउँछन् ।
चितवनमा ३७२ मा झरेको गैँडाको संख्या बढाउन स्थानीय सरोकारवालाको ठूलो भूमिका छ । उर्लेको चोरीसिकार नियन्त्रणमा आउनुका पछाडि चितवनवासीको जागरूकताले काम गरेको हो । निकुञ्जभित्र सुरक्षा पोस्टहरु बढेका छन् । चोरीसिकार नियन्त्रणमा सरकारी सुरक्षा संयन्त्रहरुको सक्रियता र समन्वय पनि बढेको छ । तर, फलदायी परिणाम आउनुमा स्थानीय जागरूकता नै हो भन्ने तथ्यप्रति कसैले फरक मत राख्न सक्दैन ।
बर्दियामा यो तहको जागरूकता नहोला भनेको होइन, तर छ या छैन भनेर परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था भने छ । त्यसैले, स्थानीय जागरूकताले काम गर्न पनि सक्ला भन्ने आँकलनका आधारमा दुर्लभ वन्यजन्तु गैँडा बर्दियामा लैजानु संरक्षणका दृष्टिले घातक काम हो । त्यसो त, सरकारी निकायभन्दा पनि चितवनबाट गैँडा लैजाने कुरामा बर्दियाका नागरिक समाज जागरूक देखिएका छन् । तर, चितवनको निकुञ्ज प्रशासनले यहाँको नागरिक समाजसँग गैँडा स्थानान्तरणको विषयमा एक शब्द बोलेको छैन ।